राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नरमा अधिकारी
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । चैत ५ गतेदेखि रिक्त रहेको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा सरकारले राष्ट्र बैंकमै तीन दशक बिताएका अधिकारीलाई सोमबार गभर्नरमा नि...
गभर्नर नियुक्ति : राष्ट्र बैंकमा महाप्रसादको ‘कमब्याक’
२४ चैत, काठमाडौं । आजभन्दा ५ वर्षअघि राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर पद खाली हुनै लाग्दा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित तीनजनाको नाम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले क्याबिनेटमा सिफार...
nepalipaisa.com . २ महीना अघि
नेपाली पैसा काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने निर्णय गरेको हो । अधिकारी यसअघि केन्द्रीय ब...
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सोमरबारको बैठकले अधिकारीलाई ५ वर्षका लागि गभर्नर नियुक्त गरेको हो। राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारी हाल लग...
डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएका महाप्रसाद बने गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएको १९ दिनपछि सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नयाँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले लगानी बोर्डका प्रम...
nayapage.com . २ महीना अघि
काठमाडौं, २४ चैत : सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । निवर्तमान गभ...
महाप्रसाद अधिकारी नयाँ गभर्नर
सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिकारीलाई गर्भनर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजक...
को हुन् नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएको १९ दिनपछि सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नयाँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले लगानी बोर्ड...
केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा महाप्रसाद अधिकारी
तस्बिर : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिएको १९ दिनपछि सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नयाँ गभर्नरमा निय...
राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी
२०७६ चैत २५ मंगलबार ०६:४५:०० सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अधिकारीलाई आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट...
राष्ट्र बैंक गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी, ३० बर्ष केन्द्रीय बैंकको अनुभव
bizmandu.com . २ महीना अघि
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन्। मन्त्रीपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आगामी पाँच बर्षका लागि अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्रीक...